मानव जीवन अन्त्यको अनिवार्य शर्त मृत्यु हुदाँ हुदै किन गर्छन आत्महत्या ? - TV Annapurna
काठमाडौँँ । गत कात्तिक ४ गते झापाकी २२ वर्षिय युवती रिचा सेढाईले फेसबुकमा फोटो अपलोड गर्दै क्याप्सन दिएकी थिईन “भरिएका आँखा, रित्तो मन तथा खाली निधारलाई सोध्दा हुन्छ तिहार कस्तो हुन्छ भनेर”, त्यसको भोली पल्ट बिहान उनले एउटा पोष्ट शेयर गरेकी थिईन “म यदि मरिहाले भने मेरो सम्झिन लायक कुरा के छ” भनेर त्यसको केहि घण्टामा रिचाले आत्महत्या गरेर यस संसारबाट विदा भईन् । अहिले उनको आत्महत्याको खबर सामाजिक सन्जालमा भाईरल बनेको छ । उनको फेसबुकको भित्तामा सयौँ मान्छेले श्रद्धान्जली दिदै सोधेका छन किन आत्महत्या गरेकी रिचा ? तर यस कुराको जवाफ रिचा सेढाईले दिने भने छैनन् । गत फेब्रुअरीमा चर्चित ¥यार्पर यम बुद्धले समेत आत्महत्या गरे उनको मृत्युको समेत खास कारण अझै पत्ता लाग्न सकेको छैन् । यी त हामीले बाहिर देख्दै आएका प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । पछिल्लो समय आत्महत्याले विकराल रुप लिदैँ आएको छ । आत्महत्याका खबरहरु सामाजिक सन्जाल भरि छ्यापछ्याप्ती देखिन पाईन्छन् । अझ उमेर गत तथ्याङकलाई हेर्दा त १५ वर्ष देखि ३० वर्ष सम्मको उमेरका युवायुवतीहरु नै आत्महत्या गर्ने उमेरको अग्रपंक्तिमा आउछन् ।
मानव जीवनको अन्त्यको निर्विकल्प पाटो मृत्यु हुँदा हुदैँ मान्छेले किन आत्म हत्यालाई रोज्छन त रु एक दिन मर्नै पर्छ भन्ने थाहा हुदा हुदैँ किन आत्म हत्यालाई नै मृत्युको बाटो बनाउने त ? यस प्रकारको प्रश्न मनमा उठ्नु स्वभाविक हो । यस विषयमा फरक फरक मत आउने गर्छ । आकस्मिक आवेशलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नुलाई नै आत्महत्याको प्रमुख कारण मान्न सकिन्छ । निराशा, असफलता, अत्यधिक महत्वकांक्षा, हिनतावोध, डिप्रेसन, मानसिक चिन्ता, प्रेम सम्बन्धमा दरारता जस्ता विषयहरुलाई नै आत्महत्याको प्रमुख कारणहरु मान्न सकिन्छ ।
जब मानिस विभिन्न समस्याबाट ग्रसित हुन पुग्छ उसले आफु बाच्नुको कुनै अर्थ देख्दैन् तर आफ्नो ज्यान वित्थामा फाल्दैमा समस्या समधान हुन्छ त रु यस कुरालाई ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । मृत्युलाई समस्या समधान होईन भन्ने मानसिकता राख्नु आवश्यक हुन्छ । मर्नु भन्दा पनि आफ्नो जीवन जीउने शैलीमा परिवर्तन गरेर अगाडी बढ्ने सोच बनाउनु पर्छ । कुनै कुामा असफल हुदाँ त्यो समस्याबाट भागेर होईन । समस्यासँग जुधेर अगाडी बढ्नु पर्छ । एक्लोपन बाट टाढा भएर आफुलाई जहिले सृजनात्मक कामहरुमा अग्रसर बढाउनु पर्ने हुन्छ । जहिले पनि आफुलाई मात्र नसोची मसँग मेरो परिवार समाजले पनि म बाट केहि न केहि अपेक्षा गरेको छ है भन्ने चिन्तनको विकास गरेर अगाडी बढ्ने सोचको विकास गर्नु पर्छ । आत्म विश्वास, आत्म सम्मान गर्दै आफुलाई माया गर्न सिक्नु पर्छ । तब मात्र हामी आत्म हत्याको क्षणिक भुतबाट टाढा भागेर परिस्थिती अनुसार रमाउन सकिन्छ । आत्महत्याबाट टाढा रहन सकिन्छ ।
१ लाख ८० हजार भाडा तिरेर जिल्ला जानुपर्ने यी नेतालाई के पर्यो त्यस्तो
माओवादीले सरकार छाड्ने तयारी गरेको नेता महराको खुुलासा